> Resource > Lugood > Sidee si ay u gudbiyaan Music ka Lugood in iPod
Haddii aad ka heleen iPod brand-cusub ah, si ay u sameeyaan ugu waxaa ka mid ah, waa in aad rabto in aad ogaato sida ay u ka Lugood wareejiyo music in iPod. Dhab ahaantii, waa geedi socodka la wareejinta music ka Lugood in iPod waa mid aad u fudud. Just raac tallaabooyinka fudud ee hoose si ay u bartaan sida loo sameeyo.
Tallaabada 1 Orod Lugood on your computer
Download iyo rakibi Lugood on your computer. Haddii aad mar hore lagu rakibay, fadlan hubi in ay tahay nooca ugu dambeeya. Haddii aan, fadlan la casriyeeyo. Haddii kale, waxaa laga yaabaa in aysan noqon in si habsami leh ay u heeso ka Lugood wareejiyo iPod.
Tallaabada 2 dar heesahaaga Lugood aad
Haddii aadan soo dhoofsadaan heeso ka computer si aad Lugood Library, waa in aad si Lugood dari heeso hore. Riix menu icon yar ee bidixda xagga kore ee Lugood in ay doortaan dar File inay Library . Markaas daaqad ka muuqan doontaa, jidaynayey si aad dhirtuba songs on your computer iyo iyagoo aad ku dartid aad Lugood Library.
Tallaabada 3 Connect aad iPod la your computer
Riix icon menu bidixdiisa aad u sareeya ee suuqa kala Lugood iyo dooro Show Menu Bar . Markaas riix View submenu in ay doortaan Show galeeysid . Waxay ka dhigaysa mid aad u sahlan in aad ka Lugood wareejiyo music in iPod markii galeeysid waa in la daawado. Connect aad iPod la your computer. Waxaa soo bixi doona hawlgallada AALADAHA galeeysid ah.
Tallaabada 4 Music Transfer ka Lugood in iPod
Riix si aad iPod hoos AALADAHA. Dhinaca midig ee suuqa, guji Music . Ka dibna hubi ikhtiyaarka nidaameed Music . Haddii aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan heesaha oo dhan ka Lugood in aad iPod, waa in aad doorato maktabadda Music Dhan. Haddii aan, waxay dooran playlists soo xulay, articles, albums, iyo qaybaha . Riix Codso si ay u fuliyaan music Lugood ay u iPod habka wareejinta.
Taasi waa! Tani waa sida aad u ka Lugood wareejiyo music in iPod. Waa habka ugu isticmaalay si ballaaran. Si kastaba ha ahaatee, waxa aad u baahan tahay si xubnuhu aad iPod la computer hal. Marka ay isku dayaan in aad ka Lugood wareejiyo music in iPod ka computer kale, files warbaahinta, oo ay ku jiraan heeso aad iPod laga tirtirayaa. Marka aad la kulanto xaaladda, fadlan joojiya syncing iyo isku day TunesGo Wondershare. Waxay kaa caawin doona inaad nuqul ka music ka computer si toos ah iPod.
Import Music inay iPod aan tirtiro iPod:
All-in-ka mid ah aalad kasta oo in ku wareejinaya song kombiyuutar kasta si iPod kasta oo aan isagoo tirtira iPod. Waxay ka dhigaysa songs qaybsi dhexmara computer oo si sahlan iPod. Baro More >>
Waxaad in ay noqon karaan
Top iPod in Lugood Transfer Software